Mpanao politika nandatsa-drà : “Tsy tokony hitantana firenena intsony” -
AccueilSongandinaMpanao politika nandatsa-drà : “Tsy tokony hitantana firenena intsony”
Mpanao politika nandatsa-drà : “Tsy tokony hitantana firenena intsony”
08/02/2018 admintriatra Songandina 0
Anisan ‘ny nandray anjara feno sady voalohany tamin’ ny fametrahana an-dRajoelina Andry tamin’ ny toerany ny taona 2009 i Arison Jean Navandahy avy amin’ ny «Za Gasy » fony izy mbola zandary amperin’asa. Ankehitriny anefa dia nivoaka tamin’ ny fahanginany ity zandary teo aloha ity ary sahy nilaza fa « Mampalahelo fa tsy misy vidiny intsony ny rà latsaka ary sahin’ ireo olona tamin’ izany fotoana mihitsy no nilaza, fa ny lasa momban’ ny lasa ary hatreto dia tsy misy hasiny ny ra latsaka» hoy ny fanazavany. Manoloana io lesona goavana voarain’ i Arison Jean Navandahy io dia nambarany fa « tsy ra latsaka intsony ny vaha olana eto amin’ ny firenena, ary tolona ho an ‘ny fampandrosoana no mila atao fa tsy tolona ho an’ ny fitiavan-tena na seza » hoy hatrany izy. Arak’ izany dia efa hiaraha mahita fa tsy nitondra nankaiza ny sorona natao satria sorona ho an’ny seza hipetrahana ihany izany, ary fanateram-boninkazo no tambiny sisa satria na ny hanotrona io fotoana io aza tsy mba nataon’ ny tompon-kevitra.
Manoloana kosa ny fiarahan’i Ravalomanana Marc sy Andry Rajoelina dia nilaza i Arison Jean Navandahy avy amin’ ny « Za Gasy » fa « manankasina ny raha latsaka , raha hifampiresaka i Ravalomanana Marc sy Andry Rajoelina dia tokony ilaza ny marina tamin’ ireny fotoana ireny. Tahaka ny nataon’ ny Col Charles Andrianasoavina namoaka ny tena zava nisy marina, izay vao nangataka ny famelana tamin’ ny vahoaka. Satria ho antsika Malagasy ny tody tsy misy fa ny natao ihany no hiverina » . Nitondra lesona azo tsohahina ihany koa i Arison Jean Navandahy manoloana ny zava misy hitany ankehitriny mba ho anatra amin’ ny sisa . Manoloana ny fikasan ‘ireo tompon’antoka tamin’ ireny raharaha 7 febroary ireny hilatsaka ho fidiana kosa dia nilaza mazava i Arison Jean Navandahy fa « tokony ho olona madio no mitantanana firenena, fa tsy olona nandatsa drà indray no andeha hampanantena paradisa, ary tsy tokony hanaiky izany ny vahoaka ».
Fanontaniana napetraka tamin’ i Arison Jean Navandahy ihany koa ny didy izay efa nivoaka izay nanameloka ny tompon’antoka tamin’ ny raharaha 7 feboary ireny, izay tsy iza fa i Ravalomanana Marc izay nilazany fa « Maninona no misy olona manao ampamoaka ny zava nisy marina tamin’ ny 7 febroary no tsy raisin’ ny fitsarana, sa iza no tokony hanao izany . Raha ny tokony ho izy dia sokafana ny fanadiadiana amin’ ny ampamoaka izay ataon’ ny olona iray. Ka izany dia ho hentina hanatevenana ny antonta taratasin’ady efa ao amin’ ny fitsarana, ka fanairana no ataonay fa kosa mahaleo tena tanteraka izy ireo». Teny am-pamaranana dia nilaza i Arison Jean Navandahy « fa taom-pifidianana izao ary milaza ho marina avokoa ireo izay efa maloto, ka noho izany tokony andinin-tena izy ireo vao mikasa hiroso ho tsarain’ ny vahoaka amin’ ny latsa- bato». Anisan ‘ny nanatitra vonin-kazo ho fahatsiarovana ny ra latsaka noho ny raharahan’ ny 7 febroary 2009 ihany koa ny fikambanana Za Gasy tetsy Antaninarenina izay notarihin’ i Arison Jean Navandahy.
Nanao fanambarana ny filohan’ny antoko TIM, Marc Ravalomanana, ny faha-9 Janoary lasa teo fa vonona hifampiraharaha amin’i Andry Rajoelina ny tenany satria samy “businessman” izy roalahy. Marihina moa fa maherin’ny 500 ny aina nafoy nandritra ...Tohiny
Zoom Ankorondrano : Efa mampiasa herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro
Antoko HVM : Mangataka ny filatsahan’ i Hery Rajaonarimampianina